अब ५ हजार मेगावाटसम्म ‘टेक अर पे’ मा पिपिए हुने, मन्त्री पुनले दिए निर्देशन - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ ०६, २०७५ 4952 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सरकारले निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकको समस्या तथा सरकारी लक्ष्य मध्यनजर गर्दै करिब ५ हजार मेगावाटसम्म टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधानमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ ।
लक्षित उत्पादनको क्षमता कायम गर्दै गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउन यस्तो नीति अपनाइएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पेमा पिपिएको सीमा बढाउने भएको छ ।
मन्त्री पुनले हालै जारी गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासको दीर्घकालीन मार्गदर्शन समेटिएको श्वेतपत्रमा पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य आधार मानी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त लक्ष्यका आधारमा मिश्रण विद्युत उत्पादनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
१५ हजार मेगावाटको सीमाभित्र रहेर जलाशय तथा पम्प स्टोरेज आयोजना ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ रन अफ द रिभर (अर्धजलाशय) २५–३० प्रतिशत, रन अफ द रिभर (नदी प्रवाही) ३०–३५ प्रतिशत र वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
उल्लेखित आधारमा पिपिए गर्न पनि मन्त्री पुनले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । यसो हुँदा पिपिए गर्न लाइनमा पर्खेर बसेका दर्जनौं आयोजनाले राहत पाउने भएका छन् ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब ३ हजार ६ सय मेगावाट नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ । यसअघि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने ‘बेन्चमार्क (सीमा)’ भित्र रहेर पिपिए हुँदै आएको थियो ।
२०७२ फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा जलाशय र अर्धजलाशय बाहेक नदी प्रवाही आयोजनाको कोटा पुगिसकेको थियो । यसमा नदी प्रवाही आयोजना २५ देखि ३० प्रतिशत राखिएको थियो ।
ऊर्जा संकट तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजनामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य छ । जसअनुसार ३० प्रतिशत आरओआर (नदी प्रवाही) २० प्रतिशत पिआरओआर (अर्धजलाशय) र ५० प्रतिशत जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।